Admin Supervisor | Proven Technology Industry Co.,Ltd ﻿
28.7.2020, Full time , Manufacturing
Company: Proven Technology Industry Co.,Ltd
•	မော်တော်ယာဉ်လိုင်စင်ဝင်ခြင်းများ/ လုပ်ငန်းလိုင်စင်ဝင်ခြင်းများ ဆောင်ရွက်ရန်။
•	GPS တပ်ဆင်ခြင်းကိစ္စများ စီစဉ်ဆောင်ရွက်ရန်။
•	အာမခံကိစ္စများ ဆောင်ရွက်ရန်။
•	ကြော်ငြာလုပ်ငန်းခွန် နှင့် အခြားသော အခွန်ကိစ္စများစီစဉ်ဆောင်ရွက်ရန်။
•	ယူနီဖောင်းကိစ္စများ/ လိပ်စာကဒ်များ စီစဉ်ဆောင်ရွက်ရန်။
•	ရုံးအဆောင်အဦးပိုင်းပြင်ဆင်ခြင်း လုပ်ငန်းများအား စီစဉ်ဆောင်ရွက်ရန်။
•	အစည်းအဝေးကိစ္စရပ်များ နှင့် ကျွေးမွေးဧည်ခံရေးပိုင်းတို့တွင် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ရန်။
•	Assets များအား နှစ်စဉ်စာရင်းပြုစု၍ စီမံရေးရာကိစ္စများ ဆောင်ရွက်ရန်။
•	Safety နှင့်ပတ်သက်သော ပစ္စည်းများထားရှိခြင်း ကိစ္စများစီစဉ်ဆောင်ရွက်ရန်။
•	Aircon နှင့် အခြားသော စီမံရေးရာများ စီစဉ်ဆောင်ရွက်ရန်။
•	ဘွဲ့ရ (သို့) Business Management ဒီပလိုမာလက်မှတ်များ ရရှိထားသူဖြစ်ရပါမည်။
•	အသက် ၂၅ နှစ်အထက် ရှိသူဖြစ်ရပါမည်။
•	သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (၂) နှစ် အထက်ရှိသူဖြစ်ရပါမည်။
•	ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပြောဆိုဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်နိုင်သူဖြစ်ရပါမည်။
•	မော်တော်ယာဉ်မောင်းနှင်နိုင်သူအား ဦးစားပေးခန့်ထားမည်ဖြစ်ပါသည်။
Work location No. F/S-14, Bayintnaung Road, Shwe Sabei Yeikmon, Kamayut Township,Yangon
707 Days, Full time , Manufacturing
•	Reporting to General Manager (Sales & Marketing). •	Create materials based on segments, field training, field communications, partnership requirements, and coordination with Markets. •	Support product roadmap; own marketing communications, support sales & marketing field through executive briefings and customer meetings. •	Developafeedback loop for product performance, gather market research including addressable and selling markets, work with team for timely & adequate entrance into the markets / segments. •	Devel ...
•	Comments reply •	Ability to handle urgent complaint case •	Report and check customer feedback •	Direct dial with inquiry customer (Direct phone call) •	Learning activities of competitors •	Search and update with the latest trends, phrases and concepts. •	Write new content based on research and development of interesting content for the target audience •	Share promotional ideas with the team. •	Identify the needs and gaps of our customers in our content and recommend new things •	Assist marketing teams in developin ...
•	မိမိ၏ Sales Performance အားတိုက်ရိုက်တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်ရန်။ •	အရောင်းကားများ အချိန်မှီထွက်ခွာခြင်း နှင့် အရောင်းများအချိန်မှန်စွာ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ရန်။ •	ကုန်ပစ္စည်းများခွဲဝေမှု နှင့် အကြွေးများကောက်ခံရရှိ� ...
•	မော်တော်ယာဉ်လိုင်စင်ဝင်ခြင်းများ/ လုပ်ငန်းလိုင်စင်ဝင်ခြင်းများ ဆောင်ရွက်ရန်။ •	GPS တပ်ဆင်ခြင်းကိစ္စများ စီစဉ်ဆောင်ရွက်ရန်။ •	အာမခံကိစ္စများ ဆောင်ရွက်ရန်။ •	ကြော်ငြာလုပ်ငန်းခွန် နှင့် အခြားသော အခွ ...
•	Prepares minutes for permanent records following meetings. •	Collaborates with the MD to assemble meeting agendas; working to include Parking Lot items and To Do List items •	Updates and maintains the BOD Contact List and circulates to BOD members •	Familiar with Board procedures and ensures the Board is in accordance with By-Laws. •	Supervises Board elections. •	As Secretary-Elect or Past Secretary, keeps the working documents such as the Policy Register and Board Procedures Manual up to date and current. •	Please see Boa ...
Admin Supervisor Admin, Secretarial & PA Jobs Joblesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss JobsInYangon Proven Technology Industry Co.,Ltd Admin, Secretarial & PA jobs Admin, Secretarial & PA jobs Manufacturing Jobs in Myanmar, jobs in Yangon